किन फ्लप भए सुपरस्टार ! – Rapti Khabar
किन फ्लप भए सुपरस्टार !
निर्माता छबिराज र शिल्पाबीचको विवाद टुंगियो, दुवैबीच मिलापत्र
निर्माता छबिराज ओझा र उनकी पत्नी नायिका शिल्पा पोखरेलबीचको विवाद टुंगिएको छ। बिहीबार महानगरीय प्रहरी परिसरमा दुई घन्टा लामो छलफलपछि छबि-शिल्पाबीचको विवाद मिलापत्रमा टुंगिएको हो।
दुबैबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीले बताए। उनका अनुसार चार दिनअघि शिल्पाले छबिबाट शान्ति सुरक्षामा चुनौती रहेको भन्दै परिसरमा उजुरी दिएकी थिइन्।
‘शिल्पाको शान्ति सुरक्षामा आँच पुग्ने कुनै पनि कार्य नगर्ने उहाँ (छबि)ले प्रतिबद्धता जनाउनु भएपछि मिलापत्र भएको हो,’ बोगटीले भने।
२०७३ सालमा सुटुक्क बिहे गरेका दुबैबीच अहिले हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध नरहेको बताइँदै आएको छ। शिल्पा छबिले भित्र्याएकी चौथी श्रीमती हुन्। नायिका रेखा थापासँग पारपाचुके भएसँगै उनको स्थानमा छबिले शिल्पालाई ‘इन्ट्री’ गराएका थिए। सुरुमा निर्माता-नायिकाको व्यावसायिक हुँदै उनीहरुको सम्बन्ध बिहेमा परिणत भएको थियो।
शिल्पाले डिभोर्शको केस हालिन: करिश्माले भनिन, तिमि न्यायकालागि कानुनि प्रक्रियामा जाउ
फिल्म निर्देशक छबि ओझा र शिल्पा पोख्रेलको पारिवारिक सम्बन्धमा अझै सुधार आएको छैन ।छबि ओझाले हामी बिचको समस्या हल भयो, हामी मिलेका छौ भन्दै गर्दा यता शिल्पाले भने छबि संग अब बस्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएकि छिन । एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा बोल्दै शिल्पाले ३ बर्ष देखि श्रीमानबाट अन्याय भोग्दै आएको र अन्तिम भएपछी अब सम्बन्ध तोड्ने […]
काठमाडौं, असोज ११. गायक तथा सर्जक विक्रमजंग शाह नयाँ गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। ‘खोला खाल्सी हे माया’ बोलको गीतको भिडियो आइतबार गौशालास्थित डी एन्ड डी क्याफेमा सार्वजनिक गरिएको छ। गीतमा शाह र गायिका सिर्जु अधिकारीको पनि स्वर रहेको छ। गीतको लय अमृत खातीले तयार पारेका हुन् भने शब्द गायक स्वयम्को रहेको छ। गायक […]